Wararka - Kooxdayadu waxay si guul leh uga soo qaybgaleen bandhigga maqaar saarka ee Hong Kong ee 2019
Kooxdayadu waxay u duuleen Hong Kong bishii Maarso 12,2019, Waxayna bilaabeen 3 maalmood 'bandhigga'APC oo ah maqaar, Qalabka Maaddooyinka iyo Bandhigga Qalabka, Waxaa lagu qaban doonaa Hong Kong Shirka & Xarunta Bandhigga Foomka Maarso 13 illaa 15. hoolka wuxuu u qaybsan yahay laba dabaq, Dabaqa kaluumeysiga waxaa loogu talagalay Qalabka Mashiinka ceyriinka ah, sida maqaarka adhiga, maqaarka idaha, lambskin Dabaqa labaad waxaa loogu tala galay agabyada dharka lagu iibiyo. gacmo gashi gacmo gashi, dhogorta dhallaanka, koofiyadaha maqaarka adhiga, roogagga maqaarka idaha, Tibet astaanta dhogorta adhiga iyo barkimooyin.
Bandhigyadan, Waxaan la kulannay macaamiisheenna badan ee caadiga ah oo aan wada shaqeynaynay sannado badan.Waxaan si xor ah uga hadalnay isbeddellada horumarineed ee galoofyada maqaarka adhiga ah iyo mustaqbalka warshadaha Qalabka Qalabka Mashiinka. Japan, South korea, Australia, USA, Canada iyo dalal kale. Waxay muujiyeen xiise weyn alaabtayada harag adhigu.
Gaar ahaan, Gacmo-gacmeedyada gacmo-gacmeedyada gacmo-gacmeedka lagu sameeyo, koofiyadaha adhiga ee moodada ah, jilicsanaanta iyo adkaysiga waarta carruurta adhiga. iibso qorshaha qaar ka mid ah maqaarka adhiga oo heer sare ah.Sidaa darteed, waa fikrad wanaagsan in laga helo agabyada maqaarka iyo qalabka moodada halkan.
Tan iyo markii la aasaasay shirkadda 2002, Kooxdayadu waxay sii wadaan raadinta gacmo gashi maqaarro tayo sare leh iyo galoofyo maqaar adhi ah.Waxaan u duulnaa Hong Kong, waxaan u duulnaa USA, waxaan u duulnaa Talyaaniga. qabashada moodooyinka ugu jarista yar. Offcuse, sidoo kale sifiican ufahamida baahiyaha macaamiisha oo kusii wado badalida qaabaynta iyo sameynta galoofyada maqaarka adhiga ee ku haboon.Waxaan kaliya ka dhignaa galoofyada maqaarka adhiga ah inay qancin karaan macaamiisha. Hadba sidaad sare u taagantahay ayaad sii arki doontaa. Marka, Caawimaad kasta, Fadlan ha ka waaban inaad ii sheegto.Waxaan ku dadaali doonaa intii karaankeyga ah inaan ku caawiyo.Waxaan nahay xirfadle ku xeel dheer gacmo gashi